नेपाल आज | महिनावारीमा प्याडको विकल्प कप, तर कसरी लगाउने ?
महिनावारीमा प्याडको विकल्प कप, तर कसरी लगाउने ?
काठमाडाैं - महिनावारी भएका किशोरी वा महिलालाई निकै नै गाह्रो हुन्छ । अधिकांसले यस्तो बेला प्याड प्रयोग गर्ने गर्छन् । अब भने विकल्पको रूपमा ‘मेन्सट‍्रुवल कप’ आएको छ । यो प्याडभन्दा निकै नै सजिलो र स्वास्थ्यका हिसाबले राम्रो मानिन्छ।